संस्कारको आवश्यकता किन ? सोमवार, श्रावण २६, २०७७
के फोटोग्राफिक मेमोरी सम्भव छ ? शनिवार, श्रावण २४, २०७७
लकडाउन डायरी मंगलवार, श्रावण २०, २०७७
कस्तो जनै किन लगाउने ? हिजो जनैमा साँचो झुन्डिए जस्तै आज थरमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रको पहिचान झुन्डिएको छ भनेर पनि विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थितिमा जनैको पहिचान सङ्कटमा पर्नु स्वाभाविक छ । यस किसिमको सङ्कटापन्न परिस्थितिमा जनैको महत्त्व कसरी बताउने र यसको संरक्षण कसरी गर्ने ? सोमवार, श्रावण १९, २०७७
बुद्धिवाला 'ब्रेन' बुद्धि मानव मस्तिष्कको एक महत्वपूर्ण गुण हो। बुद्धिका कारण नै मानिस अन्य प्राणीभन्दा श्रेष्ठ र सभ्य मानिन्छ। अहिले मानिसले जेजति विकास र प्रगति गरेको छ, मानिसको यही बुद्धिकै प्रतिफल हो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, बुद्धिर्यस्य बलंतस्य अर्थात् जो बुद्धिवाला छ, उही वलवान् छ। शनिवार, श्रावण १७, २०७७
एसिड आक्रमण : कानुनमाथिकै एसिड प्रहार एसिड तेजाव लगायतका केमिकलको आक्रमणले महिलाको सौन्दर्यतामा ह्रास आउने मात्र नभई अधिकांश महिलाहरुमा मानसिक तथा सामाजिक विचलन आउने समस्या देखिन सक्छ। महिलाहरु निस्फ्रिकी भएर बाहिर हिड्ने वातावरण नहुनु र महिलाहरु कति बेला हिंसाको शिकार हुने हो भन्ने डरैडरमा बाँच्नु पर्दा उनीहरुको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा समेत ठूलो समस्या देखिन सक्छ। शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
कस्तो आसनमा कतातिर फर्केर बस्ने ? हामीहरू सामान्यतया बिहानको सन्ध्या गर्दा र देवीदेवताको पूजा गर्दा पूर्व दिशातिर फर्केर, बेलुकाको सन्ध्या गर्दा पश्चिम दिशातिर फर्केर अनि श्राद्ध गर्दा दक्षिण दिशातिर फर्केर कर्महरू गर्दै आएका छौँ तर हामी किन अलग अलग कर्म गर्दा अलग अलग दिशातिर मुख फर्काएर कर्म गर्छौं ? भन्ने बारेमा शास्त्रीय र वैज्ञानिक कारणहरूको ख्याल गरेका छैनौँ । सोमवार, श्रावण १२, २०७७
कस्तो भोजन कसरी ग्रहण गर्ने ? पहिलाभन्दा हाम्रो भोजनालयमा खानाका धेरै प्रकारहरू त थपिँदै गए तर तिनले हामीलाई शौचालयमा र औषधालयमा धेरै समय प्रतीक्षा गरेर बस्न बाध्य बनाए । यसै सन्दर्भमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कस्तो भोजन कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा बताएका केही कुराहरूले हामीलाई स्वस्थ र मेधावी बनाउन केही न केही मात्रामा सहयोग पुर्‍याउलान् भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ । सोमवार, श्रावण ५, २०७७
मौद्रिक नीति : राहत र अवसर साना तथा मझौला उद्यममा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीको सीमामा वृद्धि कृषि कर्जाको सीमामा वृद्धि, पुनःकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कर्जा लगानी प्रक्रियामा केही सहजता, बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा अंकुश, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अंकुशले गर्दा साना तथा मझौला उद्यममा नेपालीलाई आकषित गर्ने र उद्यमशीलता वृद्धि गर्नतर्फ मौद्रिक नीति अग्रसर भएको देखिन्छ। सोमवार, श्रावण ५, २०७७
देशबासीलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्ण पाठ) काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपद् र कोरोनाको संकटमा सरकार नागरिककै साथमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राति देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना संकटसँगै बाढी पहिरो सहितका प्राकृतिक विपत्तिको पनि सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे। यो अवस्थामा सरकार आफ्ना नागरिकको साथमा दह्रो साथ उभिने बताए। शनिवार, असार २७, २०७७
यौनसम्पर्क र कोरोनाको डर कोभिड १९ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजिज होइन, यौन सम्पर्कबाट यो रोग सर्दैन । यौनसम्पर्कबाट सार्स कोभ २ अर्थात कोरोना भारइसको संक्रमण भएको कुनै प्रमाण पनि छैन । कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा सास फेर्दा तथा संक्रमित व्यक्तिले छोएको, समाएको तथा खोकेको ठाउँमा समाई साबुनपानी हात नधोइकन नाकमुख लग्ने हो भने सर्न सक्दछ । बिहिवार, असार २५, २०७७
उपसभामुखको रोपाइँ अनुभव : १८ वर्ष अरुको घरमा काम गर्दा पनि धान रोप्ने छुट्टै रहर थियो विवाह अघि कमलरीको काम गर्दा भने वर्षको ३ सय रुपैया मेरो ज्याला थियो । त्यो ज्याला मैले देख्न पाउँदिन थिएँ । आमाबुवाले लिएर जानुहुन्थ्यो । पहाडीयाको घरमा काम गर्दा त्यो ज्याला आउँथ्यो । तर थारु समुदायको घरमा काम गर्दा भने ज्यालाको केही कुरा थिएन । एक जोर कपडा पाइन्थ्यो, त्यसमा लेहंगा, बलाउज र एउटा सल हुन्थ्यो । पछिल्ला दिनमा पो ज्याला पनि दिनको ५ सय ७ रुपैया भयो । अरुको घरमा काम गर्दा पनि रोप्ने एउटा छुट्टै खालको रहर थियो । जसको पाएपनि रोप्न जान मन लाग्ने । रोप्न पाउँदा खुशी र उत्साहीत हुन्थ्यौं । सोमवार, असार १५, २०७७
कृषिमन्त्रीको रोपाइँ अनुभव : छिटो रोप्ने भएर अर्मपर्ममा जान्थेँ ३०–४० जनाको समूह बनाएर एकै ठाउँमा धान रोप्थ्योैं । एउटा खेतको गरामा १०–१२ जनाको लहर मिलाएर रोपाइँ हुन्थ्यो । रोपाइँका बेलामा असारे गीत पनि घन्किन्थे । घरका पीडा, माइतीलाई सम्झेका कुराहरु गीतमा गाउँथे । हामीले पनि आफुभन्दा ठूलाले गाएको सुनेर गाउथ्यौं । बाउसे र रोपाहार बीच हिलो छ्यापाछ्याप हुन्थ्यो । सोमवार, असार १५, २०७७
के हो 'कोरोना जन्तर' ? हिंजोदेखि नेपालमा 'कोरोना जन्तर'को चर्चा चुलिएको छ । के हो त यो जन्तर ? जापानको एउटा कम्पनीले क्लोरिन क्लोरिन डाइअक्साइड प्रोड्युसर, ग्यास स्टेइन रिलिज एजेन्ट, ब्याम्बो कार्बनजस्ता रसायनहरू राखेर घांटीमा झुन्ड्याउने परिचय पत्रजस्तो डिभाइस ३-४ महिना पहिले निकालेको थियो । यसलाई जापान, हङकङ, चीन, भियतनाम, अरबका देशहरु लगायत धेरै देशमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । शनिवार, असार १३, २०७७
गोरो हुने क्रिमको कालो कथा गोरो भएपछि केटाहरू झुम्मिन्छन्, राम्रो श्रीमान् पाइन्छ’, ‘गोरो हुने क्रिम लगाएपछि काममा पनि सफलता पाइन्छ,’ पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा यस्ता विज्ञापन देखिनु अब नौलो भएन। त्यही विज्ञापनलाई विश्वास गरेर गोरो हुने क्रिमलगाउनु पनि नौलो रहेन । तर, त्यसले अनुहार र छालामा कति नकारात्मक असर पाररिहेको छ भन्नेचाहिँ धेरैलाई पत्तै छैन। बिहिवार, असार ११, २०७७